Shaqaale shisheeye ah oo muddo ku dhow hal sano afduub loogu haystay Somaliyaa oo la siidaayey. [Akhris …] – Radio Daljir
Shaqaale shisheeye ah oo muddo ku dhow hal sano afduub loogu haystay Somaliyaa oo la siidaayey. [Akhris …]
Muqdisho, Aug 11 – Waxaa maanta xorriyadoodii dib u helay 6 qof ajaaniib ah muddo 9 bilood ah ku afduubnaa gudaha Soomaaliya, kuwaasi oo gacanta lagu dhigay dhamaadkii sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2008-da.
Dadkaan oo xilligii la afduubtay u shaqaynayey hay?ad lagu magacaabo ACF, ayaa kala ahaa afar qof oo caddaan ah iyo labo madow ah, waxaayna ka soo kala jeedeen dalal France, Bulgarian, Belgium iyo Kenya.
War laga soo xigtay xafiiska m/weynaha faransiiska Nicolas Sarkozy, ayaa lagu sheegay xaaladda dadkaasi in ay hadda tahay mid wanaagsan isla markaana ay ku sii jeedaan dalka Kenya, waxaana warku uu intaasi ku daray in si weyn loogu faraxsan yahay siidaynta dadkaasi.
Warka laga soo xigtay xafiiska m/weynaha Faransiisku, ma tilmaamin sababta siidayntooda ka danbaysay iyo waxa lagu qanciyey kooxdii afduubka u haysatay dadkaasi, waxaana sidoo kale caddayn halka dadkaasi lagu hayey muddadii ay afduubnaayeen.